MarTech ဆိုတာဘာလဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ - အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ် Martech Zone
၁၆ နှစ်ကျော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအကြောင်းဆောင်းပါးပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကိုထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက် MarTech အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ MarTech ကဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးပေးရတာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာသင်တန်း၏ MarTech တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လမ်းတံတား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာ၏။ ငါအသုံးအနှုန်းကိုအတူတက်လာရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းလွဲချော် စျေးကွက်နည်းပညာ ပြီးနောက်ငါ့ site ကို rebranding မတိုင်မီနှစ်ပေါင်း MarTech စက်မှုလုပ်ငန်း - ကျယ်ပြန့်မွေးစားခဲ့သည်။
ထိုအသုံးအနှုန်းကိုမည်သူတိတိကျကျရေးသားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသုံးအနှုန်းကိုလက်ခံရာတွင်အဓိကကျသည့်ဖြစ်သူ Scott Brinker ကိုကျွန်ုပ်အလွန်လေးစားပါသည်။ Scott ကငါထက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်တယ်။ သူကစာတစ်စောင်ထားခဲ့တယ်၊
Martech သည်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသောအဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ၊ အားထုတ်မှုများနှင့်ကိရိယာများကိုသက်ဆိုင်သည်။
ဒီမှာသူငယ်ချင်းတွေဆီကဗီဒီယိုကောင်းတစ်ခုပါ ဒြပ်စင်သုံး Martech ကဘာလဲဆိုတာတိုတိုနှင့်ရိုးရှင်းသောဗွီဒီယိုဖော်ပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
MarTech ၏သမိုင်း: MarTech အတိတ်
MarTech ၏ပြည်နယ်: MarTech လက်ရှိ
MarTech Stack ဆိုတာဘာလဲ။
MarTech ၏အနာဂတ်: MarTech အနာဂတ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ MarTech ကိုအင်တာနက်အခြေပြုဖြေရှင်းနည်းအဖြစ်မကြာခဏစဉ်းစားသည်။ ငါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဝေါဟာရများရှေ့ပြေးကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်နယူးယောက်တိုင်းမ်၊ တိုရွန်တိုဂလက်ဘီနှင့်မေးလ်တို့ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ terabyte အရွယ်အစားဒေတာသိုလှောင်ရုံများတည်ဆောက်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ETL) ကိရိယာများ။ ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်။ ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာ၊ ဖုန်းခြေရာခံခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်၊ သူတို့သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ထားသောခဲဖိအားများမှဓာတုဗေဒတက်ကြွပြားများသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးမကြာမီသတင်းစာများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သောမီးခွက်များ၊ ငါ (Mountain View) မှာအဲဒီကျောင်းတွေကိုတကယ်တက်ခဲ့တယ်။ ဒီဇိုင်းမှသည်ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံး ၀ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစာမျက်နှာဖိုင်များ (ယနေ့ခေတ် high-end မော်နီတာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်နှစ်ဆပိုများနေသေးသည်) ကိုဖိုင်ဘာသို့ပထမဆုံးရွှေ့ပြောင်းသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုကိုဖန်သားပြင်များသို့ပို့ဆောင်ပြီး ... ထို့နောက်ပုံနှိပ်စက်များသို့ပို့သည်။
ဒီကိရိယာတွေဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဟာအရှိန်အဟုန်မြင့်မားနေတယ်။ ဤကိရိယာများသည်ထိုအချိန်က cloud-based မဟုတ်သကဲ့သို့ SaaS မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုစနစ်များ၏ပထမဆုံး web-based ဗားရှင်းအချို့တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ GIS အချက်အလက်များကိုအိမ်ထောင်စုအချက်အလက်အလွှာနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဂြိုဟ်တုအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၊ အင်ထရာနက်ဖိုင်ဘာသို့အင်တာနက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်ငါအလုပ်လုပ်ခဲ့သောထိုစနစ်များနှင့်နည်းပညာအားလုံးသည်ယခုအခါ cloud အခြေခံများဖြစ်လာပြီး web, email, ကြော်ငြာနှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများကိုထုထည်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်လာသည်။
ထိုဖြေရှင်းချက်များနှင့်အတူ Cloud သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မလိုအပ်သည်မှာစျေးနှုန်းချိုသာသောသိုလှောင်ခြင်း၊ bandwidth၊ memory နှင့် computing power တို့ဖြစ်သည်။ ဆာဗာများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းလာခြင်းနှင့် bandwidth ကိုတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ တစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ (SaaS) မွေးဖွားခဲ့တယ် ... ငါတို့ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်ဖူးဘူး ဟုတ်ပါတယ်၊ စားသုံးသူတွေကအဲဒီအချိန်တုန်းကဝက်ဘ်၊ အီးမေးလ်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးမပြုခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုထုတ်လွှင့်တဲ့မီဒီယာ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သူတို့ကပင်အပိုင်းအစများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ခါတုန်းကအမှုဆောင်အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူက“ ငါတို့ကအခြေခံအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတီထွင်ခဲ့တယ်” လို့ပြောပြီးငါအရမ်းရယ်ရတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိသောမဟာဗျူဟာများသည်ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သောနည်းပညာပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သို့သော်ရှုပ်ထွေးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပုံစံများနှင့်အလေ့အကျင့်များသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆိုအင်တာနက်မတိုင်မီနှစ်များအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရပေမည်။ Mainframe မှတဆင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်အလုပ်လုပ်သောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ workstation မှဆာဗာ ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့ (ဟုတ်ကဲ့ ... ) ရှိသည်။ နင်လူငယ်တွေအတွက် ... ဒါကအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့တယ် မိုဃ်းတိမ်ကို သင်၏ terminal / workstation သည် browser ဖြစ်သည့်အပြင်သင်၏သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာစွမ်းအားသည်ဆာဗာတွင်ရှိသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်း၌လည်ပတ်နေသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများအထိ ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ကြော်ငြာ, အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု, အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, အီးမေးလ်စျေးကွက်, မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (ဝဘ်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် စာတို), စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု, ကြီးမားတဲ့ဒေတာ, analytics, အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်း, ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး, အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ အတွေ့အကြုံအသစ်များနှင့် ထွန်းသစ်စနည်းပညာများ တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်၊ virtual reality၊ ရောနှောထားသောအဖြစ်မှန်၊ အတုထောက်လှမ်းရေး၊ သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနှင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သောလက်ရှိနှင့်အသစ်သောပလက်ဖောင်းများတွင်သူတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေနေကြသည်။
Scott သည်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သူသည်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီး… MarTech ရှုခင်း ၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
Scott သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတာ ၀ န်ကို အခြေခံ၍ ရှုခင်းကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲနေစဉ်လိုင်းများသည်ပလက်ဖောင်းများနှင့် ၄ င်းတို့၏အဓိကစွမ်းရည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနေသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဝယ်ယူသူများ၊ ရောင်းဝယ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းစျေးကွက်သမားများသည်ဤပလက်ဖောင်းများကိုစုစည်းပြီးပေါင်းစပ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ပေါင်းစည်းမှု၏စုဆောင်းမှုကိုအဖြစ်လူသိများသည် MarTech Stack.
A MarTech Stack ဤသည်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အလားအလာရှိသည့်ဝယ်ယူမှုခရီးစဉ်တစ်လျှောက်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်စဉ်များကိုသုတေသနပြုခြင်း၊
Martech Stack သည်မကြာခဏလိုင်စင်ရ SaaS ပလက်ဖောင်းများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်လိုင်စင်ရ SaaS ပလက်ဖောင်းများနှင့် cloud-based စီးပွားဖြစ်ပေါင်းစည်းမှုများပါဝင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Corporate MarTech Stacks အများစုသည်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများအား၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖြန့်ကျက်ရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးကြသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းပြproblemနာသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကတွင်ဖြစ်စေဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံဂုဏ်သိက္ခာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အချက်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကြောင့် MarTech သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများထက်ကျော်လွန်ပြီးယခုတွင်သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုများ၊ အရောင်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်ထည့်သွင်းထားသည်။
MarTech အာကာသထဲတွင် bits နှင့်အပိုင်းအစများကိုတည်ဆောက်သော Salesforce, Adobe, Oracle, SAP နှင့် Microsoft တို့ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်ကုမ္ပဏီများကိုလျင်မြန်စွာအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ၎င်းတို့ကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုအစမှအဆုံးအထိဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောပလက်ဖောင်းများတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ဒါပေမဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ် Salesforce တွင် Cloud များစွာပေါင်းစပ်ရန်ဥပမာလိုအပ်သည် အတွေ့အကြုံရှိ Salesforce မိတ်ဖက်များ ဒါကဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်များကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လများသို့မဟုတ်နှစ်များကြာနိုင်သည်။ SaaS ပံ့ပိုးသူ၏ရည်မှန်းချက်မှာဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်များပေးရန်ဖြစ်သည်။
MarTech ကိုအသုံးပြုရန်ယနေ့စျေးကွက်သမားသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပလက်ဖောင်းများလိုအပ်သောကန့်သတ်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်ဖန်တီးမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာစွမ်းရည်များထပ်တူကျလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်တစ်ခုသည်ဒိုမိန်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အီးမေးလ်စာရင်းအတွက်အချက်အလက်သန့်ရှင်းခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းများတည်ဆောက်ရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်၊ ၀ ယ်ယူသူအားလုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကော်ပီရေးခြင်းစွမ်းရည်၊ အီးမေးလ်ဖောက်သည်များနှင့်စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအားလုံးအတွက်တသမတ်တည်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသောအချက်အလက်နှင့်ကုဒ်သည်။ Yikes ... ဒါကလိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ပါ။ အဲဒါကအီးမေးပဲ။
ယနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရင်းအမြစ်၊ ဖန်တီးမှု၊ အပြောင်းအလဲနှင့်အဆင်ပြေရန်နှင့်အချက်အလက်များကိုမည်သို့တိကျစွာအနက်ဖွင့်ရမည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ပြissuesနာများ၊ သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်သူတို့၏အရောင်းအဖွဲ့မှထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများကိုအံ့သြလောက်အောင်ဂရုပြုရမည်။ ဒီမဏ္anyိုင်တွေထဲကတစ်ခုမှမရှိရင်သူတို့ဟာအခွင့်အလမ်းနည်းနည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကိုကူညီနိုင်တဲ့ပြင်ပအရင်းအမြစ်တွေကိုမှီခိုနေရမယ်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးအမြတ်ကောင်းသည့်စီးပွားရေးဖြစ်ခဲ့သည်!
၀ ယ်ယူသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ အကြောင်းအရာများကိုစီစဉ်ရန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်၊ ဦး ဆောင်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဦး စားပေးရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများအပါအ ၀ င်အလယ်အလတ်နှင့်လမ်းကြောင်းတိုင်းတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှဝင်ငွေနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကိုခြေရာခံရန်တပ်ဖြန့်ထားသည်။ အချို့သောရိုးရာပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်သံလိုင်းများတွင် QR ကုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခြေရာခံနိုင်သောလင့်ခ်တစ်ခုထည့်သွင်းထားနိုင်သော်လည်းအချို့သောရိုးရာရုပ်သံလိုင်းများသည်ဒီဂျစ်တယ်နှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းလာကြသည်။
ယနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးကြောင်းဖော်ပြလိုသည်။ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကြိုဆိုသည့်အချိန်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာတိုပေးပို့မှုများကိုပေးသည်။ ငါလိမ်လိမ့်မယ် ယနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများမှအနှောင့်အယှက်ပေးခံရခြင်းအပေါ်စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ပျက်ဆီးစေသည်။ ငါဒီမှာထိုင်နေစဉ်ငါ့မှာမဖတ်ရသေးတဲ့အီးမေးလ် ၄၀၀၀ ရှိတယ်။ ငါခွင့်ပြုချက်မရဘဲနေ့စဉ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့စာရင်းများစွာထဲကနေစာရင်းမထုတ်တော့ဘူး။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှင့်အတုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်ကူညီနေစဉ်ကုမ္ပဏီများသည်ဤဖြေရှင်းချက်များကိုဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ စားသုံးသူများသတိမထားမိသောရာနှင့်ချီသောအချက်များစုဆောင်းခြင်း၊ ပိုများသောမက်ဆေ့ခ်ျများ။
ဒါဟာစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဖြစ်ပုံရလေလေ၊ စျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပရိသတ်တွေထဲကကြော်ငြာတွေကိုစပမ်း (သို့) သူတို့မျက်လုံးတွေဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေသူတို့မြင်တွေ့နိုင်မယ့်ရုပ်သံလိုင်းတိုင်းမှာစကင်လုပ်ထားတဲ့ကြော်ငြာတွေကို SPAM များများကပို SPAM ပေးတယ်။
MarTech သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမီလိုက်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် privacy ပိုမိုတောင်းဆိုရန်၊ သတိပေးချက်များကို disable လုပ်ရန်၊ SPAM ကိုပိုမိုတက်ကြွစွာအစီရင်ခံရန်၊ ယာယီနှင့်ဒုတိယအီးမေးလ်များကိုဖြန့်ဝေရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ browser များက cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များခြေရာခံခြင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဒေတာခွင့်ပြုချက်ကိုဖွင့်ပေးသောပလက်ဖောင်းများသည်စားသုံးသူများကသူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်သောသိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသည်။
ဖြစ်ချင်တော့၊ ငါပြန်လာတဲ့ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းအချို့ကိုကြည့်နေတယ်။ ခေတ်မီဆန်းပြားသော CRM နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုဖွင့်လှစ်သောကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သည်တိုက်ရိုက်နှင့်ပုံနှိပ်စာတိုက်ပရိုဂရမ်များနှင့်ပိုမိုတိုးတက်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းများကိုတွေ့မြင်နေသည်။ သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာတိုက်ပုံးသည် ၀ င်ရောက်ရန်ပိုမိုစျေးကြီးသော်လည်း၊ စပမ် ၄၀၀၀ မပါဝင်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်မူဘောင်များနှင့်နည်းပညာများကြောင့်ပလက်ဖောင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ပေါင်းစည်းရန်နှင့်စီမံရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဝေမှုအတွက်အီးမေးလ်ထောက်ပံ့သူတစ် ဦး အားတစ်လဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ငွေရသောအခါကျွန်ုပ်နှင့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်အင်ဂျင်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသောကျွန်ုပ်တို့၌ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအလုံအလောက်ရှိသည်။ တစ်လကိုနှစ်ကောင်တန်တယ်။ ဤအရာသည် MarTech ၏နောက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ကုဒ်မဲ့နှင့်ကုဒ်မပါသည့်ပလက်ဖောင်းများယခုတိုးတက်လျက်ရှိသည်။ developer များအနေဖြင့်ကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းမရေးပဲမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်များကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းအသစ်များသည်နေ့စဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမည့်ပလက်ဖောင်းများထက်သာလွန်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းရည်များဖြင့်နေ့စဉ်ပေါ်ထွက်လာနေသည်။ ငါကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးစနစ်များကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည် Klaviyo, Moosendနှင့် အကြွင်းမဲ့, ဥပမာ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များထံမှဂဏန်းနှစ်လုံးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရှုပ်ထွေးသောခရီးများကိုပေါင်းစည်း။ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစနစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်, လပေါင်းများစွာယူကြလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည်များကိုခြေရာခံရန်ခက်ခဲသည် Jebbit ၀ ယ်ယူသူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုသွားရန်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက်လှပပြီးကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောပထမ ဦး ဆုံးပါတီ cookie များဖြင့်ပေးနေကြသည်။ Third-party cookies များကိုစစ်ပွဲက Facebook ရဲ့ pixel ကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေသင့်တယ်။ ဒါက Google ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် Facebook ကလူတိုင်းကို Facebook နဲ့ off လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် Facebook ၏ရှုပ်ထွေးသောပစ်မှတ်ထားမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဂူးဂဲလ်၏ဈေးကွက်ဝေစုကိုတိုးပွားစေသည်။
Artificial intelligence နှင့် high-end ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းများသည် omni-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်သူတို့၏ဝယ်ယူမှုခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အသစ်များရရှိရန်မည်သည့်အားထုတ်မှုကိုမည်သည့်နေရာတွင်သုံးစွဲသင့်သည်ဟူသောခေါင်းကိုခြစ်နေသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုတီထွင်ရာ၌စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများသည်မိမိတို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအချိန်ကိုကုန်လွန်စေနိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အနာဂတ်သမားမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအလိုအလျောက်များလေလေဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမောင်းနှင်ပြီးအလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များကိုတန်ဖိုးထားသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအောက်ပါစွမ်းရည်များကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သတ်မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နေသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုတိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဖောက်သည်တန်ဖိုးနှင့်ဝယ်ယူမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်ရန်စွမ်းရည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက် - ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ရန်သင့်လျော်သောအစီရင်ခံစာများကိုစုဆောင်းရန်နာရီသို့မဟုတ်ရက်များစောင့်ဆိုင်းနေမည့်အစားလှုပ်ရှားမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီလေ့လာခြင်း။
360 ဒီဂရီကြည့်ရန် - အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအမှုဆောင်နိုင်ခြင်း၊ သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊
Omni-Channel - ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ကြားခံဆက်သွယ်လိုသောကြားခံသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ၌ကျွန်ုပ်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စနစ်။
ထောက်လှမ်းရေး - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘက်လိုက်မှုထက်စျေးကွက်သမားတစ် ဦး အနေဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအချိန်တန်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အတွက်မှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုအပိုင်းအစများ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်စနစ်များရှိသည်။
Martech: Past, Present and Future အပေါ်သင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ကြားလိုပါသည်။ ငါဒါကိုရိုက်ခဲ့လား၊ သင့်လုပ်ငန်း၏အရွယ်အစား၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များပေါ် မူတည်၍ သင်၏အမြင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်များစွာကွာခြားနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ငါဒီဆောင်းပါးကိုလတိုင်းဒါမှမဟုတ်ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးလုပ်ဖို့သွားမယ်။ ဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြဖို့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
Martech ကိုသင်အမြဲတမ်းအလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏သတင်းလွှာနှင့်ကျွန်ုပ်၏ Podcast တခုကိုရယူပါ။ သင်နှစ်ခုလုံးအတွက်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံနှင့်လင့်ခ်များကိုရှာပါ။
Tags: ကြော်ငြာanalyticsကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာmartechMartech သမိုင်းMartech ပေါင်းစည်းမှုMartech stackမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရောင်းစွမ်းအားScott brinkerseoစာတိုလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံစီမံခန့်ခွဲမှုMartech ကဘာလဲ
Loop & Tie: B2B အဝေးရောက်လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည်ယခု AppExchange Marketplace တွင် Salesforce App တစ်ခုဖြစ်သည်
Swarmify - သင်၏စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် YouTube ဗွီဒီယို Embeds မသုံးရန်အကြောင်းရင်းလေးခု